Gudiga Kediska iyo Maamulka SBC oo siweyn loogu soodhaweeyay Qardho – SBC
Gudiga Kediska iyo Maamulka SBC oo siweyn loogu soodhaweeyay Qardho
Maamulka Hay’ada Warbaahinta Soomaaliyeed ee SBC, Gudoomiyaha iyo Xubnaha Gudiga Tartan Aqooneedka bisha Ramadaan ee SBC iyo weliba Saraakiil ka tirsan shirkada Isgaarsiinta golis Telecom ayaa galabta si heersare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar .
Dhageyso Xayeeysiis Kedis
[audio:http://sbclive.net/sbca/wp-content/uploads/2011/08/IIDHEH-SBC-IYO-XASAN-.mp3|titles=IIDHEH SBC IYO XASAN-]
Maamulka gobolka, Kan degmada, Odayaal iyo waxgarad iyo weliba bulsha weynta magaalada Qardho ayaa Wafdigan kaga hortagay meel ka baxsan magaalada, waxaayna halkaasi ugu sameeyeen soo dhaweyn aad u balaaran iyagoo gacmaha ku lulaya caleemo qoyan iyo boorar ay ku xardhanyihiin ujeedada Wafdiga iyo weliba waxyaabo ku aadan Tartan aqooneedka Kediska SBC.
Dhalinyarada Xaafada magaaladaas ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii soo dhaweynta balaaran u sameeyay Wafdiga Barnaamijka tartan aqooneedka Kediska iyagoona muujinayay sida ay ugu faraxsanyihiin ku qabashada kulanka ugu dambeeya kediska Magaalada Qardho.
Maxamed Deeq Cabdala kusimaha Agaasimaha SBC International oo la hadlay SBC Online ayaa sheegay in Soodhaweynta loo sameeyay aanu fileyn ayna aheyd mid heersare ah islamarkaana ay aad u farxad gelisay.
Sanadkan ayaa waxaa la qorsheeyay in Final-ka Tartan aqooneedka Kediska ee ay SBC International u qabato bisha ramadaan Xaafada Deegaanada Puntland in lagu qabto magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar, waxaana wafdigani ay u socdaan sidii halkaasi loogu kala saari lahaa 2da xaafad ee ka soo baxay 24tii xaafad ee ka qeyb galay Tartanka .
Habeennimada Khamiista ayaa lagu wadaa in Qardho lagu qabto Barnaamijka lagu kala saarayo labada xaafadood, Xorgobole Qardho Vs Xingood Qardho, iyadoo halkaasi lagu diyaariyay goob aad iyo aad u weyn oo lagu qaban doono xaflada gaba gabada Tartanka Kediska.
Sikastaba ha ahaatee Maalmihii ugu dambeeyay ayaa magaalada Qardho waxaa ka soconeysay Qaban qaabada Xaflada Gaba gabada Tartanka, iyadoo ay wadeen dhalinyada xaafadaha magaalada Qardho, SBC iyo weliba Shirkada Barnaamijkan Maalgelineysa ee Golis Telecom Somalia.
Agoosto 31, 2011 at 10:29 pm
asc dhaaman reer puntlan gaar ahaan reer qardhood , aad ayaan ugu faraxsanahay ,guudsha aad gaarteen sisoo kale
SBC iyo GOLIS waxaan leeyahay waxaad ka qaybqaadateen sidii aad dhalinyuaradiina u hormarilahaydeen, waana ku mahadsantihiin.runtii ani waaxan ku noolahay qurbaha , waxaan jeclahay barnaamijka kadiska ramadanka inaan lasocdo